Thread: REVIT STRUCTURE
04-18-2010 11:27 AM
Rep Power0REVIT STRUCTURE
Revit Structure ကို စဖ္ဗင့်လိုက်ပြီဗျို့။ Basic Video Training တချို့နဲ့ ကနဦး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
MEF မောင်နှမတ္ဗေကို ပါဝင်ဆွေးနွေးအကြံပေး Share ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်တယ်နော်။
VTC ရဲ့ Basic Video Training
Quick Time Player တော့ရှိဖို့ လိုမယ်။
ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေလည်း မကြာမီ...လာမည်...မျော်... :e :e :e
Reply With Quote The Following4Users Say Thank You to zero248 For This Useful Post:
Ko-Naing, William Paul, ကိုထွန်း, အောင်မြင် 04-18-2010 07:00 PM
Rep Power0ပြန်စာ -> REVIT STRUCTURE
VTC ရဲ့ Basic Training Full Set
Ko-Naing, William Paul, ကိုထွန်း, အောင်မြင် 04-12-2011 02:32 PM
Rep Power0Zero248 ခင်ဗျာ revit structure training link တွေ ဒေါင်းလို့မရဖြစ်နေတယ် ပြန်တင်ပေးပါအုန်း
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to Hein Naing For This Useful Post:
Ko-Naing, ကိုထွန်း, အောင်မြင် 02-25-2012 05:24 PM
Posts 24	Thanks 63
Rep Power0ကိုZero248 ရေ links တွေ ဒေါင်းလို့ မရလို့ ပြန်တင်ပေးပါအုံးနော့်.....
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to forevernaw For This Useful Post:
Ko-Naing, ကိုထွန်း, အောင်မြင် 02-25-2012 09:35 PM
Rep Power0Originally Posted by forevernaw
ကိုZero248 ရေ links တွေ ဒေါင်းလို့ မရလို့ ပြန်တင်ပေးပါအုံးနော့်.....
So sorry for my late reply. I didn't reach MEF for too long already. I'll try to get them back as soon as possible.
Again! so sorry to keep you all waiting so long.
Reply With Quote The Following5Users Say Thank You to zero248 For This Useful Post:
kay lay, phyo, William Paul, ကိုထွန်း, အောင်မြင် 02-25-2012 11:33 PM
Rep Power0တောက်က လင့်ကနေ ဒေါင်းလို့ ရသွားပါပြီ။ မြန်မြန်လေးတော့ ဒေါင်းကြနော်။
ဖရီး အကောင့်ဆိုတော့ မဒေါင်းတာကြာရင် လင့်က သေရော။
Reply With Quote The Following 8 Users Say Thank You to zero248 For This Useful Post:
forevernaw, kay lay, kosithuag, phyo, shangyi, William Paul, ကိုထွန်း, အောင်မြင် 03-02-2012 02:45 PM
Rep Power0ကျေးဇူးနော် ကို zero248 ရေ...
kay lay, tunaungkyaw, ကိုထွန်း 10-20-2014 03:06 PM
Rep Power0Thank you..Ko zero248 i had completed download at 21/10/2014.
Reply With Quote 11-11-2016 08:42 PM
Rep Power0ကျွန်တော်ကတော့ 4Share Desktop Application တင်ပြီး ဒေါင်းလိုက်တာ အဆင်ပြေပါတယ်။
account တစ်ခု အရင်ဖွင့်ပါတယ်။
ပေးထားတဲ့ Link က At to my account ကိုတော့ နှိပ်ရပါတယ်။
ပြီးရင် computer မှာ တင်ထားတဲ့ 4Share software ကိုဖွင့်ပြီး ဝင်ဒေါင်းလိုက်တာ OK သွားပါတယ်ခင်ဗျ
Reply With Quote The Following User Says Thank You to Htet Lwin Oo For This Useful Post:
Structure Types for all & Steel Structure ကို လေ့လာခြင်း
By johnmoeeain in forum Civil Engineering
By warwar in forum မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာအခက်အခဲများ
Last Post: 11-22-2010, 09:01 AM
Structure Geology ဆိုင်ရာကောက်နှုတ်ချက်များ
By ကိုထွန်း in forum Geotechnical and Geological Engineering
Last Post: 09-21-2010, 10:15 PM
Revit MEP အကြောင်းသိကောင်းစရာ
By လိပ်ကြီး in forum AutoCAD
Last Post: 06-20-2010, 08:53 AM
Revit Structure အတွက် Room တစ်ခုလောက်ဖွင့်ပေးပါဗျို့။ By zero248 in forum အခက်အခဲများ